ỌH→R→ → in ọdụ na-efe efe • METALCO aka ọcha ọcha
Dislọ ọrụ nsị nsị / aka ọcha ụlọ bụ ihe ọhụrụ na anyị na-enye dị ka ihe obere ije ụlọ. Ọ bụ ihe ga-eme ka ọrụ aka mee ka ọ dị mfe mkpofu ahihia.
Na-asacha ma hichaa aka Ihe ndị a bụ ihe dị mkpa maka igbochi mgbasa nke nje nje na nje, na-adị na anụ ahụ aka.
Karịsịa na oge siri ike ugbu a ọgbaghara coronavirusUsoro ịrụ ọrụ ọcha na aka disinfection n'ụzọ dị ukwuu na mbenata ọrịa na mbelata mgbasa nke ọrịa, yana nke a ọ bụghị naanị n'ụlọ ọgwụ, kamakwa na ụlọ ahịa, ebe ịzụ ahịa, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, kọfị, họtel na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, yabụ ebe ọ bụla ndị mmadụ buru ibu.
Lee kwa: Sistemụ na-etolite etolite na-eji mmiri apịtị apịtị
Ugboro nke ọma na disinfection nke aka tupu ịbanye ebe ọha na eze mechiri emechi, yana n'oge ọrụ, ịzụ ahịa na ihe ndị ọzọ na-eduga na mwepụ nke mmetọ na microorganisms na-akpata ọrịa site na aka.
Ọtụtụ nje, gụnyere coronavirus na-akpata ọrịa ahụ Covid-19bụ agbụ nke RNA kpuchie ya na membrane abụba, nke na-eme ka ọ dị mfe igbochi mgbasa ya na ọrịa site na iji kemịkalụ dị ka ncha na ọgwụ.
Nzukọ Ahụike .wa na-atụ aro iji ncha na mmiri kwọọ aka kwesịrị ekwesị ruo sekọnd iri atọ na iji ọgwụ ndị na-ehichapụ ihe dabere na min. 30% mmanya.
Ọzọkwa, ị nwere ike ichebe onwe gị pụọ na ọrịa site na iji ya mkpofu aka, masks kpuchie imi na ọnụ ya akwa mmiri ihe ndị a na-ejikarị eme ihe ma na-emetụ aka.
Usoro ziri ezi ịsacha na disinfection hand na-ebelata microbial flora nke dị na anụ aka aka na iji ọgwụ disinfectants.
Ihicha ihe na-egbu nje n'ime akpụkpọ aka kwesịrị iji ihe dị ka 30 sekọnd ma ị gaghị echefu banyere ego kwesịrị ekwesị nke nkwadebe ahụ, yana ịmịnye ọgwụ ike iji ruo ebe dị na aka, ya bụ ohere dị n'etiti mkpịsị aka.
Washingsacha aka na nsachasị aka mgbe niile, n'agbanyeghị eziokwu ahụ dị mkpa maka nchekwa anyịOtú ọ dị, kpoo akpụkpọ aka, nke nwere ike ibute nfụkasị na anụ ahụ mbufụt. Iji belata mmetụta ọjọọ nke ọgwụ disinfectants ejiri na anụ aka, ekwesịrị iji nkwadebe moisturizing kwesịrị ekwesị.
Maka ịsa aka, jiri ngwaahịa ndị nwere anụ ahụ.
Ihe ọghọm Ugbu a ejiri mee ihe maka disinfection bụ nkwadebe sitere na ethyl ma ọ bụ mmanya propyl. Ndị kachasị mma na-enwekwa mmiri ọgwụ.
Stationslọ ọrụ mgbochi nke Metalco
Ihe ncha ahụ na ọgwụ disinfectant na-enye iwu nke Metalco nyere maka na-abụghị ịkpọtụrụ dosing nke kwesịrị ekwesị, elu-edu disinfectant.
Stationslọ ndị na-adị ọcha (ebe ndị a na-edebe ihe ọcha) bụ ezigbo ihe ngwọta na nke mara mma, nke kwesịrị ekwesị maka ojiji n'ime ụlọ ọ bụla.
Ezubere ngwaọrụ anyị dị ka ụlọ ọrụ ntanetị aka na n'otu oge ahụ nkesa maka ihe bara uru na mgbasa nke COVID-19, dịka uwe, mkpuchi ma ọ bụ akwa.
Udiri ikuku na - ejikwa ngwa nwere ihe eji eme ihenke na-arụ ọrụ mkpofu ahihia.
Stationslọ ọrụ disinfection nke Metalco dị mfe ma kensinammuo iji sistemu zuru oke maka ebe ọha na eze na ebe nzuzo, dị ka ọfịs, ebe ịzụ ahịa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ egwuregwu, ụlọ nri na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, ọdụ na-agba gburugburu bụ ngwaọrụ nkwado dị mkpa iji gboo ọnọdụ ịdị ọcha n'ebe ọrụ yana nchebe onwe onye nke ndị ọrụ, n'ikwekọ na usoro minista na-ahazi usoro iji belata mgbasa nke coronavirus n'ebe ọrụ.
Ngwọta ndị a na-eji na ọdụ Metalco disinfection na-enye ohere kachasị mfe nke ọrụ ngwaọrụ disinfection, mkpofu dị mfe ma dị ọcha ma mee ka ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ dị mma ma mara mma, ma dịkwa mma maka ojiji n'ime oghere ime ụlọ.
Mkpofu ahihia na-enye ohere maka nchịkọta ọcha mkpofu ahihia.
Mpaghara Matalco disinfection Station setịpụrụ:
onye na-edozi nkwadebe aka
Akụkụ nke ebe na-adọ adọ (nke nwere ụkwụ):
Ike ime ụlọ: 60 lt
Ibu ibu: ihe dika 28 n'arọ
Mwube ebe obibi ọcha
A na-eji sọks ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara mee ihe nchara, nke nwere ogwe n’ihu otu agba, ebe ogwe akụkụ dị na 7 agba dị iche iche.
COLOMBO Ebe zuru ezu - nsụgharị nchara igwe anaghị agba nchara
Ebumnuche ụlọ ọrụ disinfection a maka ime ụlọ ma dị na nsụgharị abụọ:
ya na ihe eji eji ya eme ihe nke igwe anaghị agba nchara
ya na ihe eji eme ya bu nke a na-eji ete ure kpuchie
Enwere ike ịkele ndị a na-eji igwe na-alụ ọgụ ngwa ngwa na ebe ọha na eze na ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ebe ọrụ Aka na-abụghị kọntaktị aka.
Modul ahụ bụ isi:
oghere ndị edoziri n’elu mgbidi ihu
ime ụlọ nke ibo ụzọ kpọchiri n'ihu na aka maka idobe ihe ndị dị mkpa (anụ ahụ, uwe a na-ewefu, masks)
ọnụ ụzọ mbata nwere oghere abụọ
TheBARA oghere nchekwa
MAGELLANO Ihe ndozi ya
Na arịrịọ onye ahịa chọrọ, enwere ike ịnapụta ihe ndị ọzọ a:
akpaka na-enye ihe
aka igwe anaghị agba nchara
anọ ABS wiil, kama ịzọghari ụkwụ
Ọrịa disinfection / CABRAL na-ekesa ya
Ọ bụ ezigbo ihe ngwọta ma mara mma maka adaba maka ime ụlọ na / ma ọ bụ n'èzí.
Ihe ntụgharị ahụ nwere eriri ọkpọ aluminom na-arụ ọrụ dị ka akpa jelieli na-arụ ọrụ na ụlọ alumini anwụrụ ọkụ na-arụ ụlọ nke igwe anaghị agba nchara / chrome ọla kọpa.
A na-eji ezigbo ọla mebere ebe a na-akwado onwe ya dịka ihe eji eme mmanụ.
Maka iji mee ihe n'ụsọ osimiri, ọ ga-ekwe omume itinye ụlọ ebe a na-ahụ anya, nke a na-ejikwa aluminom mee, n'ime akwa ọkpọ mmiri nke nwere ihe mkpuchi na ihe mkpuchi na skel maka itinye ya n'ájá.
oria cancer oriaAutomatic aka disinfection ọdụTheBARA oghere nchekwaebe anaghị adọba aka n’akụkụ ebe ikuku na-adịghị adọ akaonye na-akpọsa onye na-achọghịAka disinfection n'ọnụ ụzọỌnụ ụzọ ámá ntụpọỌkpụkpụ aka disinfectionCOLOMBO Stationohere njeaka disinfectionọgwụ ụlọ ọgwụ disinfectionoge disinfectionaka disinfection dispensermgbochi ntutu nke ntutu isidisinfection nke aka na ngwaọrụaka disinfection ntuziaka disinfection mgbemgbochi site na mgbochi cancer cancerayliffe aka disinfectionaka sanitizer pdfmmiri aka disinfectionaka disinfection akaaka na mmiri tupu anakọta ọbarana - enye aka n’ime nwa amụrụ ọhụrụRossmann aka disinfectionatụmatụ aka ọgbụgbacancer schulke disinfectionaka disinfection na mmanyana -esite aka na mmaaka disinfection na eriri afọaka na disinfection na salonaka na ọgwụ n'ụlọ ọgwụaka disinfection dika onyeOnye na - enyefe CABRALna-arịa ọrịa cancer ecolabaka ọchaaka na-adị ọcha na ịwa ahụnhichaaka nhichamkpofu akamgbe ị na - eji aka gị eme iheMAGELLANO Ihe ndozi yamasksna-asacha aka disinfectionna-asacha ma hichaa akahaccp aka aka na disinfectionna-asacha ma na-ehicha aka site na iji usoro ayliffeịsa aka na usorona-asa ma na-ehichapu aka ya n’ebe a na-achọ mmana-asa ahụ ma na-ehicha aka n’ụlọ ọgwụịsa aka na ọgwụ dịka usoro Ayliffe siri dịmmiri nke mmiri na-agbaze n’ime nwa amụrụ ọhụrụkwesịrị ekwesị disinfectionsanitary ebeaka adịghị ọchaaka schulke aka disinfectionakwa maka mgbochisensiva aka disinfectionskinsept aka disinfectionEgbu igbapuIhe ọghọmỌrịa disinfectionỌrịa disinfectionAka disinfection ọdụỌdụ HygienicNchekwa ọchaDislọ ọrụ nsị nsịStationslọ ọrụ nsị nsịStationslọ ọrụ mgbochi nke MetalcoStationslọ ọrụ nsị nsịStationslọ ọrụ ọchaakpukpọ okuaka tenzi n’akakọwaa ihe kpatara ọrịa cancer ji dị mkpa n’ọrụ onye na-edozi isiVESPUCCIonye bu oria cancerAka ebe nguzogide akaAka -akwụzi aka sanitizer purellgel maka mmerụ ọrịa kansa